Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Yɛbɔ Mpae? | Bible Nsɛmmisa Ho Mmuae
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mongolian Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zande Zulu
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae?
Yehowa Nyankopɔn pɛ sɛ yɛne no kasa da biara na yɛka yɛn komam asɛm kyerɛ no. (Luka 18:1-7) Yɛn ho hia no, enti sɛ yɛka yɛn asɛm kyerɛ no a, otie yɛn. Yɛn soro Agya no ara aka sɛ yɛmmɔ no mpae. Enti sɛ yɛammɔ mpae a, yɛayɛ yɛn ho.—Kenkan Filipifo 4:6.
Mpaebɔ ma yɛbɛn Onyankopɔn, enti ɛnyɛ sɛ yehia biribi nko ara na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae. (Dwom 8:3, 4) Sɛ yɛtaa ka yɛn asɛm kyerɛ Onyankopɔn a, ɛbɛma wabɛyɛ yɛn adamfo paa.—Kenkan Yakobo 4:8.
Ɔkwan bɛn na ɛsɛ sɛ yɛfa so bɔ mpae?
Onyankopɔn ani nnye ho sɛ yɛrebɔ mpae a, yɛkyekye ho. Saa ara nso na ɔmpɛ sɛ yɛkyere mpaebɔ bi gu yɛn tirim na yɛbɔ no bere nyinaa. Yɛrebɔ mpae a, sɛ yɛbɛkotow oo, yebegyina hɔ oo, ɛnyɛ ɛno na ehia Onyankopɔn. Nea Yehowa pɛ ne sɛ yebebue yɛn komam ne no akasa. (Mateo 6:7) Saa na tete Israelni Hanah yɛe. Ná biribi nkɔ yiye wɔ ne fie, enti ɔbɔɔ mpae. Akyiri yi, n’awerɛhow danee anigye, enti oyii ne yam bɔɔ mpae daa Onyankopɔn ase.—Kenkan 1 Samuel 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1.
Sɛ biribi haw yɛn a, yebetumi aka ho asɛm akyerɛ Ɔbɔadeɛ no. Yebetumi nso ada no ase wɔ nneɛma a ɔyɛ ho. Akwannya bɛn na ɛkyɛn saa? Ɛyɛ biribi a ɛnsɛ sɛ yɛtoto no ase koraa.—Kenkan Dwom 145:14-16.
Mpaebɔ Gyidi Ne Ɔsom
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN July 2014 | Adɛn na Nneɛma Bɔne To Nnipa Pa?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN July 2014 | Adɛn na Nneɛma Bɔne To Nnipa Pa?